Waa kuma halka Qof ee ay shaqaaleysiisay Dowladda Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Waa kuma halka Qof ee ay shaqaaleysiisay Dowladda Farmaajo
Waa kuma halka qof ee ay shaqaaleysiisay dowladda uu hoggaamiyo Farmaajo, laga soo billaabo maalintii xilka loo dhiibay Febaraayo 2017, hadana kamid ah guddiga doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Farmaajo tan iyo maalintii xilka madaxweyne loo doortay waxaa la joojiyay gabi ahaanba shaqaaleysiinta dowladda Farmaajo.
Arrinta joojinta qaadashada shaqaalaha cusub ayaa loo sababeeyay in mushaarkooda aysan bixin karin dowladda, sidoo kalena nidaam rasmi ah loo sameynayo shaqaalaha rasmiga ah ee dowladda kuwaasoo ay diiwaan galiyeen ururka shaqaalaha Rayidka ee dowladda Soomaaliya u qaabilsan xulista shaqaalaha rayidka.
Waraaqad rasmi ah oo kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha shaqaalaha rayidka ayaa lagu sheegay halka qof ee loo diiwaan geliyay in uu kamid noqdo shaqaalaha Rayidka, sidoo kalena la siin doono xuquuqaha uu leeyahay.
Cabdinuur Maxamed Axmed oo horay usoo noqday Agaasimaha Warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa loo magacaabay Ku xigeenka Agaasime Guud ee Madaxtooyada Soomaaliya, waxaana si rasmi ah loogu aqoonsaday in uu kamid noqon doono shaqaalaha u diiwaan gashan Dowladda isagoo aan horay uga mid ahayn shaqaalaha dowladda, balse waxa uu noqonaya qofka kaliya ee si rasmi ah loo shaqaaleysiiyay tan iyo goortii ay talada la wareegtay dowladda uu Farmaajo maamulo.
Agaasime Cabdinuur waxa uu kamid yahay shakhsiyaadka loo soo xulay inuu kamid noqdo Guddiga doorashooyinka, waana mid kamida xubnaha ay aadka uga soo horjeedaan golaha midowga musharaxiinta oo qaadacay magacaabista guddiga doorashooyinka ee laga soo kala xulay xafiisyada Madaxweynaha, RW iyo kan Hay'adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
Cabdinuur oo ah wiil dhallinyaro ah, waxaa keenay oo halkaas ku haya adeerkiis Fahad Yaasiin, waxa uuna ku cadaadiyay Farmaajo in loo aqoonsado Cabdinuur inuu kamid yahay shaqaalaha rasmiga ah ee ka diiwaan gashan shaqaalaha Rayidka.